0 အကြွေး | ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရေး & ဘဏ္ဍာရေး + ဘဏ်လုပ်ငန်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Viral စျေးကွက် Group မှ
ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရေး & ဘဏ္ဍာရေး + ဘဏ်လုပ်ငန်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS >0အကြွေး
Credit After Bankruptcy – အဘယျသို့မျှော်လင့်ရန်
If you have recently filed bankruptcy, it won't be long before you are starting to ask yourself, "အိုကေ, now, what do I do when I needaloan? Where do I got to get approved? Can I get approved?" Here are some overall basics about getting any kind of credit afterabankruptcy. 2-3 Years after bankruptcy discharge is the magic number - Once you have filed bankruptcy, even the next day you can still getacar loan and possiblyamortgage loan. ဒါပေမဲ့, getting an unsecured loan lik...
Reducing consumer debts will ease anxiety and open the door for better rates onahome loan or mortgage. ကံမကောင်းသဖြင့်, becoming debt-free isalong process, and it may take several years to achieve this goal. သင်တစ်ဦးနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်လိုလျှင်, refinancing your existing mortgage even with poor credit may present extra cash to payoff high interest credit cards. What Does it Mean to RefinanceaHome Mortgage? Refinancingahome loan is an everyday practice. There are several reasons ...
အကြောင်းအမှန်တရား 10 ခရက်ဒစ်ရမှတ်ဒဏ္ဍာရီ
ခရက်ဒစ်ရမှတ်များငွေချေးယူသူနှင့်အပေါင်ခံငွေချေးနှစ်ဦးစလုံးမှအလွန်တရာအရေးကြီးလှသည်. အလုပ်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်လုပ်နေတာကြောင့်တူညီသောလမ်းအတွက်, အားကစားသို့မဟုတ်ကျောင်းတွင်စစ်မှန်သောအကျိုးခံစားခွင့်ကိုထုတ်လုပ်, အလားတူအကြွေးရမှတ်များနှင့်အတူမှန်.
ဘယ်လို Scratch ကနေတစ်ဦးကအစိုင်အခဲ Credit Rating Build ရန်
ခြစ်ရာကနေအစိုင်အခဲအကြွေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တည်ဆောက်ခြင်းတယောက်ထင်စေခြင်းငှါ, သကဲ့သို့ခက်ခဲသည်မဟုတ်. အဖြစ်မှန်သင်ကဲ့သို့နည်းနည်းတစ်လျောက်ပတ်သောချေးငွေရမှတ်တည်ထောင်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ3လနှင့်အလှည့်ပတ်နေတဲ့အစိုင်အခဲအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြီ 12 လအမှတ်အသား. အမှတ်ကနေ, သငျသညျသငျ့လျြောသောချေးငှားခြင်းအလေ့အထကိုထိန်းသိမ်းရန်လျှင်, သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏ကျန်များအတွက်စံနမူနာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်နိုင်.
အလွန်ဆိုးရွားအကြွေးနှင့်အတူလူများအတွက်အကြွေးကဒ်များမဟုတ်တော့တဲ့ဒဏ္ဍာရီများမှာ. အများအားဖြင့်အသုံးစရိတ်ကျော်ကမီးလောင်ရာ, မကောင်းတဲ့အကြွေးလူမျိုးကိုဖြတ်ပြီးမြင့်တက်နေသည်. မကြာသေးမီကစစ်တမ်းကြောင်းနီးပါးပြသ 1 တိုင်းထဲက7အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုအောက်တွင်ရှိပါတယ် 600 အကြွေးရမှတ်.
နှစ်ပေါင်းများစွာ, သမရိုးကျဘဏ္ဍာရေးဉာဏ်ပညာကိုခဲ့သည် "ခရက်ဒစ်ကတ်များမကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြ၏။" ကျနော်တို့ကရက်ဒစ်ကတ်များထဖြတ်တောက်ကြွေးမြီ-စီးစာခြုပျကျွန်မှကိုယျ့ကိုယျကိုပြန်လွှတ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပါပဲကပြောကြားခဲ့ကြသည်. လိုအပျတဲ့လူတွေက "သူတို့ရဲ့နည်းလမ်းအတွင်းအသက်ရှင်နေထိုင်," နှင့်အကြွေးကဒ်များကိုအသုံးပြုခံရဖို့အစဉ်အဆက်ခဲ့ကြလျှင်, ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့် "အရေးပေါ်၏အမှု၌သာ။"
သင်ကများပြားလွန်း Credit Card များကိုဖူးပါနဲ့?
How many credit cards do you have? If you are like most people it is probably too many. We've all been lured in by the siren call of better rates, special perks and rewards, or lower fees so that most Americans carry between five and 10 ခရက်ဒစ်ကတ်များ. The problem is not so much that new credit card offers are so attractive but rather that we do not stop to evaluate which cards we no longer need after openinganew account. Carrying too many credit cards can wreak havoc w...
သငျသညျအဆင့်မြင့်ငွေပေးချေ Make ရန်အတင်းအဓမ္မခံရပါတယ်
ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရေး – သင့်ရဲ့လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်ကိုဘယ်လို
Although Visa and MasterCard might be the forerunners of the credit card industry, Discover card has been increasing in popularity over the last decade or so. Except for student credit cards, most Discover cards haveacomparatively low APR, and they never have an annual fee. They have also been commended for customer service and for fraud prevention. ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူ 50 million cardholders and more than4million merchant locations, Discover is proving their critics wrong. Whe...
Your Credit Card Payment Is Rising: သတိပေးခြင်း & သိကောင်းစရာများ
အဆိုပါ $10,000 Credit Card ကိုစိနျချေါမှု
အမေရိကန်. Federal Government has createdalarge number of tax credits, and some tax deductions for homeowners, hybrid and alternative car purchases, and business owners. အဆိုပါ 2005 bill can provide thousands of dollars in tax credits.
Buyingahybrid car gives the phrase go greenawhole new meaning. Not only is it good for the environment, its also good for your pocket book. Check out the tax benefits of hybrid vehicles for yourself. The government has decided that encouraging drivers to do their part to protect the environment could be better enhanced by offering tax incentives. ဒါကြောင့် 2006 seesavariety of incentives from tax credits to tax deductions. But before you get too excited, be sure you ...
ပေါင်နှံအောက်တွင် Refinancing 500 FICO
အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 101 ငွေချေး၏မတူညီသောအမျိုးအစားများကိုနားလည်ခြင်း
The changes in financing options available for residential investment properties over the last5years are staggering. Lenders have relaxed the credit and income guidelines for qualification that formerly deterred many would-be investors from entering the real estate. ဖြည့်စွက်ကာ, the down payment requirement has been eliminated for borrowers who qualify. This article surveys the landscape for lenders offering residential investment financing products.
ကြွေးမြီဖြေရှင်းနည်း – အ Options ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ
There are millions of Americans out there who have paid off heavy credit card debt, and you may be one of them. To get rid of credit card debt, it won't be enough, သို့သော်, to just make minimum monthly payments. Do you know that you just need to doalittle more than just paying the minimum monthly payments; you can save thousand of interests and shorten many in years in settling your credit card debt.
ပေါင်နှံ Quote နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကသက်ရောက်သည်
မကြာခဏ Flyer ခရက်ဒစ်ကဒ်များ
တစ်ဦးက Stockbrokers အကြံဉာဏ်
ခြေးငှေ. What does it mean .
ညံ့ဖျင်းသောချေးငွေနှင့်အတူတစ်ဦးကအိမ် Buy –3တစ်ဦးကမကောင်းပါချေးငွေအပေါင်ခံသည်အ Approved ပဲရှိသေးတွင်သိကောင်းစရာများ
မူလစာမျက်နှာ Equity ချေးငွေနှိုင်းယှဉ်ခြင်း – တစ်ဦးကဒုတိယအပေါင်ခံဒါမှမဟုတ် Equity ချေးငွေမှတဆင့်သင့်ရဲ့နေအိမ်ရဲ့ Equity သုံးစွဲနည်း
အသက်အာမခံ Vs ဘဝအာမခံချက်
တစ်ကိုယ်ရေး Consolidated ချေးငွေနှင့်အတူသင့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ချေးငွေ Away လှည်း
ကျောင်းသားချေးငွေအကြွေး Consolidated ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
မကောင်းတဲ့ Credit (1,081)
ချေးငွေ Calculator ကို (66)